ထမင်းတစ်နှပ် မြင့်လှိုင် | ထွေထွေထူးထူး ကိုရွှေထူး
Leaveareply	မြန်မာနိူင်ငံရှိဗဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ ကြွေးတင်လျှင် သံသရာထိပါသွားမယ်ဆိုတာ အားလုံးက သဘောပေါက်နားလည် လက်ခံထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံလာပြီး ချေးဌါးထားသည့်အကြွေးတွေကို ပြန်မဆပ်နိူင်သေးစဲကာလမှာ ဘာကြောင့် ပြန်မဆပ်နိူင်သေးတာလည်း ဆိုတာကို ခေါင်းအေးအေးထားပြီး စဉ်းစားအဖြေရှာတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဆိုကြပါဆို့….ပြန်မဆပ်နိူင်သေးသူကို ထောင်ချမယ်၊ ရိုက်မယ်၊ ထုမယ်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို သိမ်းဆည်းရယူမယ်ဆိုတာဟာလည်း အဖြေမဟုတ်ပါ။
ဥပမာ။ ။ ရှိလျှက်သားနဲ့ ပြန်မဆပ်တာက တမျိုးပေါ့နော်။ အခုဟာက ၃၀. ၁. ၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌါန- ဦးမြင့်လှိုင်က လယ်သမားတွေနှင့်တွေ့ဆုံပွဲမှာ အောက်ဖော်ပြပါ ကိုယ်ချင်းစာတရားခေါင်းပါးတဲ့ ဥပုပ်စောင့်ပြီး ထ္မင်းတနပ်လျှော့စားပါက အကြွေးပြန်ဆပ်ပါဟု ပြောဆိုသုံးနှုန်းလိုက်သည့်အပေါ် ကျနော့်အနေနဲ့ ခေါင်းမရှိတဲ့ ဦးမြင့်လှိုင်ကို အနည်းငယ်တင်ပြ အကြံပြုရေးသားလိုပါသည်။
ဆင်းရဲမွဲတေမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အစိုးရအသစ်အနေနဲ့ မြန်မာနိူင်ငံက အခြေခံတောင်သူလယ် သမားတွေရဲ့ ဝင်ငွေနဲ့ လူနေမှုဘဝမြင့်မားတိုးတက်မြင့်မားလာစေရန် တိကျတဲ့ ရည်မှန်းချက်များထားပြီး အကောင်ထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိတယ်ဆိုပြီး လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌါန-ဦးမြင့်လှိုင်အဖွဲ့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ပြီးတော့….ဦးမြင့်လှိုင်နှင့်အဖွဲ့ဟာ ကွင်းဆင်းပြီးလယ်သမားတွေရဲ့အခြေအနေကို လေ့လာရာမှာတော့ ဧရာဝတီတိုင်း မအူပင်ခရိုင် ဓနုမြူမြို့နယ်ထဲက လယ်ယာကဏ္ဍနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေ၊ လယ်ယာကဏ္ဍတွေမှာ အကူညီပေးမယ့်လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလည်း သွားရောက်ဆွေနွေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ ကြွေးတင်ပြီးအဆင်မပြေဖြင့်နေတဲ့လယ်သမားတွေကို လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဌါန- ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမြင့်လှိုင်က အောက်ဖော်ပြပါအသုံးနှုန်းကို အခုလို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ငါကြွေးတင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် ထ္မင်းတနပ်လျော့စားမယ်၊ တလပြည့်လို့ရှိရင် ငါဘယ်လောက် ဆပ်နိူင်မလဲ၊ ၆ လပြည့်ရင်ဘယ်လောက်ဆပ်နိူင်မလဲ၊ ဒါဆို ငါ့မိသားစုတွေ ထ္မင်းတနပ်လျှော့စားမယ်၊ ဥပုပ်စောင့်သလိုပေါ့ဗျာ၊ ကုသိုလ်လည်းရ ဝမ်းလည်းဝဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဗျာ၊ ငါတို့ဥပုပ်စောင့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓါတ်နဲ့ လုပ်လိုက်ရင် အကြွေးကြေသွားမယ်။ ရပါတယ်ကွာ- ရပါတယ်ကွာထားရင်အကြွေးမကြေဘူး။ အကြွေးမကြေရင် ခင်ဗျားသံသရာထဲကမလွတ်မှာမဟုတ်ဘူး၊ သံသရာထဲကမွတ်ရင် ခင်ဗျားနောင်ဘဝကြရင် ကျွန်ပြန်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီး” အသံမာမာနှင့်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အခုလို ဧရာဝတီတိုင်းတွင် ငွေချေးဌါးထားပြီး အတိုးပိနေတဲ့လယ်သမားတွေအပေါ် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဌါန- ဝန်ကြီးဦးမြင့်လှိုင်၏ ပြီးစလွယ် အခုလိုပြောဆိုခြင်းကို စာရေးသူအနေဖြင့် ပြင်ပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက် ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။
အစိုးရအသစ်အနေနဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လယ်သမားတွေအပေါ် တကယ်စိတ်ရင်းကောင်းစေတနာထားပြီး ဆင်းရဲတွင်မှ အထိုက်အလျှောက်လွတ်လိုလျှင်….လက်ရှိ- လယ်သမားတွေတင်နေတဲ့ ကြွေးတွေကို ပြေလည်အောင်ညှိ့နှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါသည်။
ဥပမာ။ ။ အတိုးများဖြင့် ချေးဌါးထားသည့်အကြွေး တွေကို အရင်းသာပြန်ပေးပြီး၊ အတိုးငွေများကို လျှော်ပစ်ပေးရန် လိုပါသည်။ ပြီးမှ- ၎င်းတို့ရဲ့ဝင်ငွေအပေါ်မူတည်ပြီး တလလျှင်ဘယ်လောက် ပြန်ဆပ်ပေးရမည်ဟု ငွေချေးဌါးထားတဲ့ တောင်သူလယ်သမားများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးညှိ့နိူင်လုပ်
ဆောင်သင့်ပါသည်။ အခုဟာက အဲဒီလိုမဟုတ်ပဲ ၂၀၁၂ တုန်းက လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဇော်မင်းပြောသလို ဖယောင်းတိုင်ထွန်းညှိ့ပြီးချွေတာပါလို့ လက်လွတ်စပယ် ပြောဆိုခြင်းနှင့်ထပ်တူကြနေပါတယ်။ ဝန်ကြီးတစ်ယောက်လုပ်ပြီး ပြည်သူတွေရဲ့ ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့ အခက်ခဲတွေကို ကူညီမဖြေရှင်းပေးနိူင်ရင် ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်အသိစိတ်ဓါတ်နဲ့ ရာထူးကနှုတ်
ထွက်ပေးကြပါလို့ ဝန်ကြီးအပေါင်းကို ဒီနေရာက အသိပေးပြောကြားလိုပါတယ်။အဲဒီလိုမိမိအသိစိတ်ဓါတ်နဲ့ နှုတ်ထွက်ပေးမှသာလျှင် လစ်ဟသွားတဲ့နေရာတွေမှာ လူမှန်နေရာမှန်အစားထိုးခန့်အပ်နိူင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်မှာ အရည်အချင်းမရှိတဲ့လူတွေကို နေရာပေးထားခြင်းဟာလည်း တိုင်းပြည်ပြန်လည် ထူထောင်စဲ ကာလမှာ တိုးတက်မှုတွေကိုနှောင့်နှေးစေသလို….မလိုလားအပ်ပဲ အချိန်တွေကို ဖြုန်းတီးသလို သက်ရောက်နေပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ရှင်းရှင်းပြောရရင် မနိူင်ဝန်ကိုမထမ်းမိကြပါနဲ့၊ မနိူင်ဝန်ကို ထမ်းဆောင်မိတဲ့အတွက် မိမိတာဝန်ပြီး မလုပ်ဆောင်နိူင်တဲ့အခါ အများပြည်သူတွေရဲ့ အပြောတွေကိုလည်း ခံရမှာဖြစ်ပြီး၊ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက်ပါ ဘာမှအကျိုးရှိနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။
အချုပ်အနေနဲ့ပြောရလျှင် ကျနော်ကြားဘူးတာက ကြွေးတင်လျှင် ဝက်မွေးပဲကြားဘူးတယ်။ ဥပုပ်စောင့်ပြီး ထမင်းတစ်နပ် လျှော့စားခိုင်းတာမကြားမိဘူးပါ။ အခုမှကြွေးတင်လျှင် ဥပုပ်စောင့်ပြီး ထမင်းတစ်နပ် လျှော့စားခိုင်းတာ မောင်မြင့်လှိုင်လက်ထက်ကြမှကြားဘူးပါတော့တယ်….ခင်ဗျား။
((( စာကြွင်းအနေနဲ့ အနည်းငယ် မောင်မြင့်လှိုင်ကိုထပ်မံပြောလိုတာက ဦးပုပ်စောင့်လည်း ထမင်းကို မနက်အစောကြီးတနပ်၊ နေ့ခင်း ၁၂ နာရီမထိုးခင်တနပ် စုစုပေါင်းတနေ့ နှစ်နပ်စားရပါတယ်။ ဧကန်တ ဒီလူဦးပုပ်မစောင့်ဘူးတာကျိန်းသေတယ်။ )))
( သမ္မတ- ဦးသိန်းစိန်ခင်ဗျား….ခင်ဗျားတို့အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာ သုံးမရတဲ့ခပ်ချောချောဝန်ကြီးတွေကိုမညောင်းခိုင်းသ၍
( Good government – ဂွတ်ဂါးဘားမန့်တ် ) ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရလည်း ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး….ခင်ဗျား )
((( မှတ်ချက်။ ။ အတိုးပိနေသော တောင်သူဦးကြီးများကို စာနာမှုဖြင့် ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါ )))
This entry was posted in Uncategorized and tagged ထမင်းတစ်နပ်မြင့်လှိုင်, ပစ်စာ, ဝန်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင်, မြင့်လှိုင်, မြန်မာသတင်းများ, မြန်မာနောက်ဆုံးသတင်းများ, Minister, Myanmar Minister told reduce dinner, Myanmar News Now, Myanmar Recent News, Myanmar Update News on February 6, 2013 by koshwehtoo.	Post navigation
← ပြောပြန်ရင်လည်း လွန်တော့မယ် (၁)